Radio Masti 87.9 MHz होला त अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध ?
अमेरिकाको ट्रम्प सरकारले चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाइरहेको छ । किनकि, चीनले अमेरिकाको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरिरहेको उसको विश्वास छ । ट्रम्प प्रशासनले बिहीबार यसबारे वर्षौंसम्म चल्दै आएको वार्तापछि पनि कुनै परिवर्तन नआएको हुनाले यस्तो कडा कदम उठाउन परेको बताएको छ ।
यस कारबाहीमा बाँकी विषयका साथमा चीनमाथि थप भन्सार पनि लगाउन सकिन्छ । उता, चीनको भनाइअनुसार ऊ यसको जवाफ दिन तयार छ । अमेरिकी मिडियाका समाचारअनुसार ट्रम्प सरकार चीनमाथि ३०–६० अर्ब डलरको शुल्क र चीनको लगानीमाथि नियन्त्रण गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ । अमेरिका आफ्नो गुनासो विश्व व्यापार संगठनमा पनि लान सक्छ ।
अमेरिकाका लागि व्यापारिक मध्यस्थकर्ता रोबर्ट लाइटहाइजरले बुधबार सांसदलाई बताएअनुसार अमेरिकाको मनसाय चीनमाथि अधिकतम दबाब दिनु र अमेरिकी उपभोक्तामाथि कमभन्दा कम दबाब राख्नु हो । लाइटहाइजरका अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षित राख्नु अमेरिकी अर्थव्यवस्थाका लागि अत्यन्त जरुरी छ ।
किन लगाइनेछ भन्सार ?
अमेरिकी व्यापार विभागका अधिकारीले भने– अमेरिकासित प्रमाण छ कि चीन यस्ता अमेरिकी फर्मको खोजीमा छ, जो ऊसित पार्टनरसिप गरेर चीनको बजारमा उत्रिन सकोस् र अमेरिकामाथि प्रविधि उपलब्ध गराउन दबाब दिन सकियोस् । ती अधिकारीले भने– अमेरिकालाई यस विषयको प्रमाण प्राप्त भएको छ कि चीन अमेरिकाका महत्वपूर्ण उद्योगको लगानीमा नोक्सानी पु-याइरहेको छ र साइबर आक्रमण पनि गराइरहेको छ । यो सब विषय पछिल्लो अगस्टमा राष्ट्रपति ट्रम्पले दिएको आदेशपछि भएको जाँचबाट खुलेको छ ।
बिहीबार चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले भनेको छ कि ऊ पनि यी नयाँ शुल्कको जवाफ दिनका लागि तयार छ । उसले भनेको छ– चीन चुपचाप बसेर आफ्ना हक र हितमा क्षति पुगेको हेरिरहनेछैन र आफ्ना हित रक्षाका लागि हरेक जरुरी कदम उठाउनेछ । वालस्ट्रिट जनरलअनुसार चीन पनि अमेरिकामाथि शुल्क लगाएर यसको जवाफ दिने विषयमा विचार गरिरहेको छ । यसको अर्थ हो कि चीनले अमेरिकी कृषिजन्य वस्तु आयातमाथि पनि शुल्क लगाउन सक्छ । कृषिप्रधान अमेरिकी राज्यमा डोनाल्ड ट्रम्पको मताधार बलियो छ ।
अमेरिकामा समर्थन ?
अमेरिकामा चीनले सैनिक कारबाहीमा उपयोग गर्न सकियोस् भनेर प्रविधिको खोजी गरिरहेको चिन्ता छ । अमेरिकी संसद्ले यससम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ । तर, कैयौँ राजनेता, उद्योग र व्यापारीले यस फैसलाको विरोध हुने सम्भावनामाथि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । लाइटहाइजरले पनि जवाफी कारबाही हुन सक्ने स्विकारेका छन् । उनका अनुसार विशेषगरी अमेरिकी कृषि उद्योगमा यसको असर पर्न सक्छ । तर, उनले फेरि पनि अमेरिका कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताए ।
होला त व्यापार युद्ध ?
चीनले पहिल्यै भनेको छ कि व्यापार युद्धमा कसैको जित हुनेछैन । उसले दुवै देशले शान्ति कायम राख्नुपर्नेमा जोड पनि दिएको थियो । र, उसले अमेरिकाको सन्तुष्टिका लागि उसको अपेक्षाभन्दा बढी नै परिवर्तन गर्न आफू तयार रहेको संकेत पनि गरेको थियो । ट्रम्पले एकपटक ट्विट गरेका थिए कि व्यापार युद्ध राम्रो हुन्छ र त्यसलाई जित्न पनि सजिलो छ ।
तर, अमेरिकी वित्तसचिव स्टेभन न्युचिनका अनुसार राष्ट्रपति व्यापार युद्ध सुरु गर्ने कोसिस गरिरहेका छैनन् । रोयटर्स न्युज एजेन्सीका अनुसार अमेरिकाको इलेक्ट्रोनिक उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी ‘बेस्ट बाई’ ले चीनको हुवावेसिट स्मार्ट फोन लिन बन्द गरिदिएको छ । त्यसयता अन्य टेलिकम कम्पनी एटिएन्डटी र भेरिजोनले पनि हुवावेसितको सम्बन्ध अन्त्य गरेका छन्, जब अमेरिकाले चीन सरकारसित उसको निकटतामाथि चिन्ता प्रकट ग-यो ।